Olana 5 momba ny Lalàna Maritime Emirà Arabo Mitambatra mety hanimba ny orinasanao | Orinasa Mpampanoa lalàna
Olana 5 momba ny lalàna an-dranomasina UAE izay mety hanimba ny orinasanao
Fantaro ny lalàna an-dranomasina any UAE
Lalàna momba ny varotra UAE
Ny indostria an-dranomasina dia ivon'ny varotra manerantany. Indostria iray izay misy ny fivezivezan'ny sambo sy fotodrafitrasa an'arivony amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao. Koa satria ny ranomasina dia mampifandray ny karazan-toerana rehetra manerantany dia manome fotoana lehibe itaterana entana izy ireo.
Ny indostria an-dranomasina dia ohatra tsara amin'ny zava-misy fa sarotra ny manaraka ny pitsopitson'ny lalàna. Betsaka ny lalàna samihafa mifandraika amin'ny indostria an-dranomasina, ary karazan-tsambo sy asa maro samihafa. Ny tena fahita amin'izany dia ny: lalàna an-dranomasina, fiantohana an-dranomasina, fitantanana sambo, fisoratana anarana amin'ny sambo, fahazoan-dàlana hiasa amin'ny sambo ary fahazoan-dàlana hanadihadiana an-dranomasina.
Na izany aza, mila faharetana sy alikaola vao tafiditra amin'ny fitaterana an-dranomasina. Izany dia satria ny miatrika loza sy loza mitatao maro ny indostrian'ny ranomasina varotra. Ary koa, ny fahasarotan'ny lalàna an-dranomasina dia ampy hanetsehana ny fanapahan-kevitry ny mpivarotra mafy indrindra aza.
Raha tompona orinasa na mpandray anjara amin'ny indostria an-dranomasina ianao, ity lahatsoratra ity no tena ilainao. Tena te-hahafantatra momba ny olana ara-dalàna an-dranomasina mety hanimba ny orinasanao ianao. Ny fampahalalana ilainao fotsiny no azonay.
Olana momba ny lalàna an-dranomasina UAE izay mety hanimba ny orinasanao
Ny lalàna mariazy UAE dia sehatry ny lalàna sarotra ary mifandray amin'ny lalàna maro hafa izay manome lanja ny torohevitry ny mpisolovava manam-pahaizana manokana. Ary koa, amin'izao andro ankehitriny izao dia misy lalàna maro samihafa izay mifehy ny indostria an-dranomasina izay tokony horaisina avokoa.
Ny asa an-dranomasina dia miankina amin'ny paikady fitantanana loza. Anisan'izany ny fiantohana an-dranomasina. Raha izany dia ilaina ny mahalala ny lalàna miaro ny fanananao amin'ny fatiantoka.
Amin'ny maha-tompona orinasa anao dia tokony ho fantatrao sy ho azonao ny olan'ny lalàna manakiana indrindra mety hampidi-doza ny orinasanao amin'ny indostrian'ny ranomasina varotra. Hanampy anao hiaro ny asanao amin'ny andraikitra izany ary hiantoka ny fitohizan'ny orinasao.
Ny olana ara-dalàna sasany izay mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny orinasanao dia:
Hetsika tsy ampoizina
Hetsika fakana an-keriny sy jiolahin-tsambo eny an-dranomasina
Fahasimbana amin'ny fandefasana masinina
Fangatahana fatiantoka sy fiantohana
# 1. Inona no mitranga manoloana ny toe-javatra tsy ampoizina toy ny areti-mifindra?
Tamin'ny taona 2020, ny fipoahan'ny COVID-19 dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny toekarena erak'izao tontolo izao. Ary tsy nijanona ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina. Araka izany dia nisy ny fanontaniana nipoitra izay mila vahaolana.
Ny iray amin'ireo olana nipoitra dia ny fameperana ny isan'ny mpiasa ao anaty sambo. Ny fananana ny isan'ny mpiasa an-tsambo ilaina mandritra ny areti-mandringana dia nitondra olana. Ny fananana mpiasa mijanona miaraka an-tsambo dia hanimba ny fahasalamany ary, vokatr'izany, ny fiarovana ny sambo.
Etsy ankilany, vitsy ny mpikambana ao amin'ny ekipazy mety hidika hoe tsy dia misy mpiasa intsony hiantsoroka ireo andraikitra samihafa. Mety hiteraka havizanana amin'ny mpiasa izany. Ary ny fananana ekipa reraka dia iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny fahadisoan'ny olombelona amin'ny sambo. Izany dia mety hiteraka lozam-pifamoivoizana an-tsambo maromaro.
Sarotra ny mamehy io olana io. Raha misy ny lozam-pifamoivoizana mifototra amin'ity olana ity, iza no miatrika loza? Na izany aza, ny roa tonta dia afaka misafidy ny hamaha ny olana amin'ny alàlan'ny fanakarama ekipa ao an-toerana sy fiaraha-miasa amin'ireo orinasam-pitantanana ekipa samy hafa.
# 2. Ary ny hetsika fakana ankeriny na jiolahin-tsambo any an-dranomasina?
Ny mpaka an-keriny sy ny jiolahin-tsambo dia sasany amin'ireo loza atahorana indrindra amin'ny indostria an-dranomasina.
Ny fiambenana an-dranomasina dia voakasiky ny hetsika tsy ara-dalàna isan-karazany. Anisan'izany ny fitaovam-piadiana, zava-mahadomelina, ary fanondranana olona an-tsokosoko, jono tsy ara-dalàna, tsy voalaza ary tsy voafehy, ary koa ny fandotoana any an-dranomasina. Matetika tafiditra ao anatin'ireny fihetsika tsy ara-dalàna ireny ny piraty.
Ny fiambenana an-dranomasina koa dia voakasiky ny piraty an-dranomasina, ny fakana an-keriny ary ny fandrobana mitam-piadiana eny amin'ny ranomasina.
Raha tratran'ny jiolahin-tsambo an-dranomasina ny entanao na maratra na nalaina ankeriny ny mpiasao dia hisy ny olana hiatrehana ny asanao. Ny trangan-javatra toy izany dia mety miteraka fikorontanana lalina eo amin'ny orinasanao na hampihena ny asanao an-dranomasina. Amin'ny tranga toy izany dia mila ny fanampian'ny mpisolovava matihanina an-dranomasina ianao.
# 3. Inona avy ireo lalàna tokony hapetraka raha any amin'ny firenena hafa ny samboko?
Raha tonga any amin'ny seranana ny sambonao na ny sambo mitondra ny entanao, dia manan-jo hitaky fandoavam-bola ny tompon'andraikitra amin'ny morontsiraka. Talohan'ny taonjato faha-19, ny tompona sambo sy ny kapiteny dia afaka nanao araka izay tiany rehefa nanamboatra sy niasa ny sambony.
Saingy, ireo firenena an-dranomasina dia nanomboka nahatsapa fa afaka misoroka ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina amin'ny fiheverana ny lalàna momba ny fanamboarana sy ny fiasan'ny sambo.
Tamin'ity fivoarana ity dia nanomboka namorona ny fitsipika napetrany ny firenena tsirairay. Nametraka lalàna ho an'ny olom-pireneny sy ho an'ny vahiny tonga ao amin'ny fari-dranomasin'izy ireo. Nefa avy eo, satria afaka mampiasa ny ranomasina ny sambo avy amin'ny firenena rehetra, dia nanjary olana ny fahasamihafan'ny lalàna.
Noho izany, amin'ny maha-tompona orinasa eo amin'ny sehatry ny ranomasina anao, dia tsy maintsy mamaritra izay lalàna mihatra amin'ny sambonao amin'ny fotoana isan-karazany. Ho an'ity dia mila mpisolovava an-dranomasina efa za-draharaha ianao hanampy anao hahalala izany.
# 4. Inona no ataoko raha manana olana amin'ny fahasimban'ny milina aho?
Ny iray amin'ireo vokatry ny areti-mandringana Covid-19 dia ny nanakana ny fidirana amin'ny fikolokoloana sy ny servisy ilaina. Nisy ny fanelingelenana tamin'ny famatsiana ireo kojakoja fanampiny sy ireo vokatra fototra hafa toy ny menaka lube sy ny diloilo hydraulic. Ireo fanelingelenana ireo dia nanemotra ny fotoana voatondro hikarakarana ny sambo.
Izy ireo koa dia niafara tamin'ny toe-javatra izay tsy maintsy nampiasan'ny ekipazy naoty na marika hafa. Araka izany, ny tompon-tsambo dia natahorana hanemotra sy hamaky milina mandritra ny areti-mandringana.
Fanampin'izany, napetraka ny fameperana ny dia izay nilaina ny injenieran'ny manam-pahaizana manokana hanatanteraka fanamboarana sambo tsy hahazo miditra amin'ireo sambo. Izany dia nampitombo ny lozam-pifamoivoizana.
Ny fahasimban'ny milina na ny fanapotehana azy dia efa iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny folo taona lasa. Fantatra ihany koa amin'ny tsy fahaizan-kaja, ny sambo tsy dia salama dia mety hitera-doza amin'ny mpiasa.
Raha toa ka misy ifandraisany amin'ny ratra ataon'ny mpiasa ny toetoetran'ny sambo dia mety ho antony hitakiana ratra ho azy izany.
Noho izany, raha sendra fahavoazana ianao noho ny fahasimban'ny milina sy ny tsy fahaizanao injeniera manam-pahaizana manokana, iza no miantoka ny vidin'ny fatiantoka?
# 5. Ahoana no hamaritako ny fitakiana sy ny fatiantoka ananako?
Matetika, ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fahaverezan'ny fitakiana fiantohana. Izany dia noho ny lalàna izay manome fepetra ny tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ateraky ny mpandeha sy ny mpiasa ao anaty sambo.
Ahoana raha toa ka mitsambikina indray ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana amin'ny 2021? Mety ho vaovao tsara izany. Na izany aza, midika ihany koa izany fa ny tompon-tsambo dia mety miatrika hetsika ara-dalàna raha misy ny fanafoanana na ny fipoahan'ny aretina eny an-tsena.
Ahoana ny momba ny fanambarana mety hapetraka amin'ny sambo entana noho ny fahatarana amin'ny fanaterana entana? Ireo dia tena mahafaty indrindra ho an'ny entana mety ho mora tohina amin'ny mari-pana, simba, na mihena ny fotoana.
Raha te hiatrika ity olana ara-dalàna mialoha ity ianao dia tsy maintsy manolo-tena tanteraka amin'ny fanatanterahana ny drafitra fitaterana entana mahomby ny orinasanao. Ireo drafitra ireo dia tsy maintsy misy fiomanana amin'ny hetsika tsy ampoizina, amin'ny fampiasana teknolojia vaovao hanamorana ny asa.
Avelao ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates hanampy anao hiaro ny orinasanao an-dranomasina
Ny indostria an-dranomasina dia mandrakitra firoboroboana amin'ny fahafaha-miasa. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny e-varotra sy ny fanatontoloana. Na eo aza ny loza sy risika voalaza etsy ambony dia maro ihany koa ny tombony azo amin'ny fananana asa an-dranomasina.
Amin'ny maha-tompona orinasa an-dranomasina anao, dia afaka manana karama enina enina ianao, fotoana mety fivezivezena, fandrakofana ara-pahasalamana, ary tontolon'ny asa sarotra. Ity 'tontolon'ny asa sarotra' ity, izay tombony, dia faran'izay ratsy ihany koa. Raha tsorina dia misy risika ny asa an-dranomasina. Izany no antony ilanao anay: mpisolovava manam-pahaizana momba ny sambo an-dranomasina any UAE ao Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants. Manolotra serivisy momba ny lalàna an-dranomasina azo itokisana izahay any UAE.
Ny mpisolovava an-dranomasina manam-pahaizana anay dia mahavita ary mazoto manome antoka fa manatanteraka asa an-dranomasina tsy misy fanelingelenana sy mahomby ianao any UAE. Manana traikefa amin'ny lafiny samihafa amin'ny lalàna an-dranomasina isika. Araka izany, afaka manampy anao izahay hiatrika ireo fanamby ireo eo amin'ny indostria an-dranomasina. Ireo mpisolovava an-dranomasina any UAE dia tena mahay sy manana traikefa amin'ny fikirakirana ny ady an-dranomasina. Hanome anao torohevitra ara-dalàna avo lenta izahay, ary manana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao hamahana ny olan'ny ranomasina. Ny tanjonay dia ny hampihena ny fiantraikan'ny fifanolanana an-dranomasina amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fanolorana vahaolana lafo.
Ny orinasan'ny lalàna an-dranomasina any UAE dia hanome anao fampahalalana marina ihany koa momba ny fepetra takian'ny lalàna an-dranomasina. Hanome solontena ara-dalàna mifantoka, mahomby ary manokana koa izahay amin'ny raharahan-dranomasina. Izahay dia manana ny fahalalana rehetra ilainao hananana orinasa an-dranomasina mahomby.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fandefasana an-dranomasina sy ny fifanakalozana any UAE ianao na tianao izahay hanampy anao amin'ny raharahan'ny ranomasina, Mifandraisa aminay ankehitriny.